Dawladda Ethiopia Oo Shaacisay Dhoofinta Gaas Laga Soo Saarayo Dhul Degaanka Soomaalida Ethiopia. |
Dawladda Ethiopia Oo Shaacisay Dhoofinta Gaas Laga Soo Saarayo Dhul Degaanka Soomaalida Ethiopia.
Addis ababa(GNN)-Wasiirka macdanata ee Itoobiya, Tolosso Shagi, ayaa shaaca ka qaaday in gaaska ‘DSI’ lagu soo saari doono muddo 3 ilaa 5 sano ah. Waxaa uu wasiirku intaa ku daray, in dhoofinta shidaalkaasi dalka soo gali doonoto lacag dhan $ 1 bilyan sanad kasta.
Wasiirka ayaa sheegay in sahaminta shidaalka ee gobolku socotay muddo dheer, balse tobankii sano ee la soo dhaafay oo kaliya ay hawshaasi midho-dhal noqotay.
Dhulka gaaska dabiicga ah laga soo saarayo ayaa ku yaala ‘Ogaden basin’ oo ah meelaha ay isugu yimaadan gobolada Qoraxay iyo Shabeele. Goobahan oo lagu magacaabo Jeexdin iyi Ilaale ayaa la sheegay in uu ku jiro keyd gaas oo dhan 4.7 triliyan kuyuubic.
Waxaa shaqadan faraha kula jira shirkad laga leeyahay Shiinha oo aduun badan ku maalgalisay soo saarida shidaalka. Shirkadan oo lagu magaacabo Poly – GCL ayaa sheegaty in ay dhamaystirtay wajigii hore qodista ceelasha iyada oo rajaynaysa in wajiga labaad durba la bilaabo.
Ururka ONLF oo ka dhaqdhaqaaqa goobo gobolka ka mid ah ayaa dhawr jeer ku hanjabay in uu bar-tilmaameed ka dhiganayo shirkadaha shidaalka ee ka hawlgalaa agaas. Ururka ayaa sheegay in sahaminta iyo soo saarida shidaalku tahay sharci-darro tan iyo inta dadka gobolka degan ay ka tashanayaan aayahooda.
Haseyeeshee, Wasiirka macdanta Ethiopia waxa uu jimcihii wakaaladda AP u sheegay in dadka degaanka lagu qanciyay soo saarista shidaalka, sidaasi darteedna aan walaac laga qabin dhinaca ammaanka soo saarista shidaalka.
Wadamada Jabuuti iyo Itoobiya ayaa kala saxeexday heshiis is-fahan oo lagu dhisiyo dhuun dheer oo dhan 1000km oo isku-xidha goobaha gaska laga qodayo iyo dekada Jabuuti oo la doonayo in gaaska laga dhoofiyo.
Wasiirka ayaa hadlakiisa ku soo xidhay in dhaqaalaha ka sokow mashruucu abuurayo fursad shaqo iyo farsamo lagu horumariyo gobolka.
Sanadkii 2007-dii ayaa 65 qof oo Ethiopian ah iyo 9 Shiine ah lagu dilay dhul degaanka soomaalida Ethiopia. Dadkaasi ayaa ka shaqaynayay sahaminta gasta, waxaana beegsaday kooxda ONLF ee ka soo horjeeda Ethiopia.